Mpanamboatra sy mpamatsy boaty fibre optika | China Fiber Optical Terminal Box Factory
Topimaso Ity boaty fizarana fomba mini ity dia ampiharina amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 1 core, 2 cores, 4 cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana. ● Fametrahana mora: Mametaka amin'ny rindrina na apetraka amin'ny tany fotsiny. ● Ny fantsom-panafody dia azo esorina rehefa ilaina na mandritra ny fametrahana azy amin'ny ...
Ny topy maso ny boaty fizarana optique EFON FDB-004C dia mamarana tariby fibre optika iray hatramin'ny 4 cores, mitondra fanatsarana lehibe miteraka fanandraman'ny mpanjifa tsara kokoa rehefa tsy maintsy apetraka ny FTTH. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana. ● Fametrahana mora: Mametaka amin'ny rindrina na apetraka amin'ny tany fotsiny. ● Ny fantsom-panafody dia azo esorina rehefa ilaina na mandritra ny fametrahana azy amin'ny fampandehanana sy fampidirana mety; ● Adaptors slots natsangana - Tsy misy visy ilaina ...
Ity boaty fizarana style mini ity dia ampiharina betsaka amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny port fiber. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 1 core, 2 cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana. ● Fametrahana mora: Mametaka amin'ny rindrina na apetraka amin'ny tany fotsiny. ● Ny fantsom-panafody dia azo esorina rehefa ilaina na mandritra ny fametrahana azy amin'ny fandidiana mety sy ...
Ity boaty fizarana style mini ity dia ampiharina betsaka amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny port fiber. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 1 core, 2 cores ary 4 cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana ● Fametrahana mora: Mipetaka amin'ny rindrina ● Fiasa mora: fibre plug tsy mila manokatra akorandriaka ● Fidirana tariby fibre amin'ny lafiny rehetra, manohana ny ...
Topimaso Ity boaty fizarana fomba mini ity dia ampiharina amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 1 core, 2 cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana. ● Fametrahana mora: Mametaka amin'ny rindrina na apetraka amin'ny tany fotsiny. ● Adaptors slots natsangana - Tsy misy visy ilaina amin'ny fametrahana adaptatera. ● Atsofohy ny fibre tsy mila ...
Topimaso Ity boaty fizarana fomba mini ity dia ampiharina amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 1 core, 2 cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana ● Fametrahana mora: Mipetaka amin'ny rindrina ● Fidirana tariby fibre avy amin'ny lafiny rehetra, manohana ny fantsom-pifandraisana amin'ny scenario samihafa. ● Adapter azo adika: SC, ...